Edere site Tranquillus | Jan 6, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Dịka iwu n'ozuzu, enwere ike ịwepụta ego etinyere na atụmatụ nchekwa ọrụ gị naanị opekata mpe afọ 5. Otú ọ dị, ọnọdụ ụfọdụ nye gị ohere iwepụta ihe niile ma ọ bụ akụkụ akụ gị n’oge. Alụm di na nwunye, ọmụmụ, ịgba alụkwaghịm, ime ihe ike n’ụlọ, ezumike nká, nkwarụ, ịzụrụ ihe onwunwe, mmezigharị ebe obibi bụ́ isi, ụgwọ karịrị akarị, wdg N'agbanyeghị ihe kpatara gị, ị ga-arịọ arịrịọ maka ịhapụ gị. Chọpụta n’isiokwu a ihe niile ị ga-echeta maka usoro a.
Kedu mgbe ị nwere ike ị mepee atụmatụ nchekwa ọrụ gị?
Dịka iwu dị n'ike, ị ga-eche oge iwu nke afọ 5 iji nwee ike ịdọrọ akụ gị. Nke a metụtara oke na ụgwọ ọnwa. Enwekwara ike ịdọrọ ego gị ozugbo, ọ bụrụ na ọ bụ PER ma ọ bụ PERCO.
Yabụ, ọ bụrụ na ọnọdụ chọrọ ngwa ngwa chọrọ ka ịme nke a. You nwere ike ibido usoro ị kpọghee ego ndị ọrụ gị tupu oge ahụ akwadoro. N'okwu a, ọ bụ ntọhapụ izipu ma ọ bụ ịkwụghachi ụgwọ n'oge. Maka nke a, ị ga-enwerịrị ezigbo ihe kpatara ya. Egbula oge ime nyocha iji chọpụta ihe kpatara nsogbu a maka ụdị arịrịọ a.
Fọdụ ndụmọdụ bara uru
Nke mbu, odi nkpa ichoputa kpomkwem banyere okwu banyere nbuputa mbu nke metutara gi. Nakwa envelopu nke ọ metụtara: PEE, Perco ma ọ bụ mkpokọta PER. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ebido arịrịọ gị maka ịhapụ gị ngwa ngwa dịka usoro iwu ndị enyere.
Mara na faịlụ ọ bụla akọwapụtara. Ya mere, odi nkpa igwa onwe gi tupu oge eruo banyere onodu di iche nke etinyere na nkwekọrịta gi. Echefula iweta ihe ọ bụla gosiri na izi ezi nke arịrịọ gị. Tinye otu akwụkwọ iwu ma ọ bụ karịa na akwụkwọ ozi gị. Ga-etinye ohere niile n'akụkụ gị iji nweta nkwekọrịta ịhapụ ngwa ngwa. Ọnọdụ ọ bụla chọrọ ihe akaebe doro anya: akwụkwọ alụmdi na nwunye, akwụkwọ ndekọ ezinụlọ, akwụkwọ nke enweghị isi, akwụkwọ ọnwụ, akwụkwọ nke ịkwụsị nkwekọrịta, wdg.
GỤỌ Mkpa nke isiokwu isiokwu na email ọkachamara
Tupu izipu arịrịọ gị, gbaa mbọ hụ ego ole ịchọrọ ịhapụ. N'eziokwu, ị nweghị ikike ịrịọ ụgwọ nke abụọ maka otu ihe ahụ. N'okwu a, ị ga-echere ruo mgbe a ga-eweghachi ego gị.
Akwụkwọ ozi arịrịọ maka ntọhapụ nke atụmatụ nchekwa ndị ọrụ
Ndị a bụ leta abụọ ị nwere ike iji kpughee ego ị na-akwụ ụgwọ.
Ihe Nlereanya 1 maka arịrịọ maka nhapụ mbụ nke atụmatụ nchekwa ndị ọrụ
Nọmba faịlụ :
Adreesị Ndebanye aha
Koodu nzipu ozi na obodo
[Ebe], na bọchị]
Site na akwụkwọ ozi edebanyere na nnabata nke nnata
Isiokwu: Arịrịọ maka ịhapụ ndị ọrụ echekwara ngwa ngwa
Etinyere m nkà m na ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị ebe ọ bụ na (ụbọchị mbanye) dị ka (ọnọdụ nke ọnọdụ gị).
Ana m arịọ arịrịọ maka mbupute nke ego onye ọrụ m. Edere nkwekọrịta m n'okpuru amaokwu ndị a: aha, nọmba na ọdịdị nke nkwekọrịta ahụ (PEE, PERCO…). Ọ ga-amasị m ịdọrọ (akụkụ ma ọ bụ ihe niile) nke akụ m, ya bụ (ego).
N'ezie (kọwaa nkenke ihe kpatara arịrịọ gị). Ana m ezitere gị mmasị (aha nke ihe akaebe gị) iji kwado arịrịọ m.
Na echere nzaghachi nke m nwere olile anya na ị ga-anabata gị, biko nabata, Madam, ngosipụta nke ekele m.
Ihe Nlereanya 2 maka arịrịọ maka nhapụ mbụ nke atụmatụ nchekwa ndị ọrụ
Nọmba ndebanye aha:
Isiokwu: Akwụkwọ ozi nke ịhapụ ndị ọrụ sonyere na mbụ
Were n'Ọrụ ebe (ụbọchị nke ụgwọ) na ụlọ ọrụ gị dị ka (ọnọdụ enwere), m na-erite uru site na atụmatụ nchekwa ndị ọrụ m ga-achọ ịhapụ (nke zuru ezu ma ọ bụ nke ezughị ezu).
N'ezie (kọwaa ihe kpatara ị ji chọọ itinye akwụkwọ arịrịọ maka igbochi: alụmdi na nwunye, azụmaahịa azụmahịa, nsogbu ahụike, wdg). Iji kwado arịrịọ m, m na-ezitere gị dịka mgbakwunye (aha nke akwụkwọ nkwado).
A na m arịọ gị ka mwepụta (ego) site na akụ m (echefula ịkọwapụta atụmatụ nke atụmatụ nchekwa gị).
N’olile anya na ị ga-enwe nkwekọrịta na ngwangwa, nara, Sir, okwu m ekele m.
Tipsfọdụ aro maka ide akwụkwọ ozi arịrịọ
Nke a bụ akwụkwọ ozi edepụtara iji wepụta ụfọdụ ma ọ bụ ndị ọrụ gị niile na-ekere òkè na akaụntụ nchekwa gị. Ọdịnaya nke akwụkwọ ozi ahụ kwesịrị ịbụ nke ziri ezi ma kwụ ọtọ.
GỤỌ Project Voltaire Na-eme Ka Ị Nwee Egwuregwu Ọhụụ A ma ama
Karịsịa, gbaa mbọ hụ na akwụkwọ nkwado gị ruru ụbọchị iji nwee olile anya maka nzaghachi dị mma. Gosiputa onodu I jidere n'ime ulo oru ma gosiputa ndi oru gi ma oburu na inwere.
Ozugbo akwụkwọ ozi gị dị njikere. Nwere ike izipu ya site na ozi edebanyere aha na nnabata nke nnata ozugbo na ụlọ ọrụ na-elekọta ego gị. Maka ụfọdụ ụlọ ọrụ, enwere ụdị ngwa mmeghe iji budata site na ntanetị n'ịntanetị na usoro PDF.
Rịba ama na arịrịọ gị ga-edozi n'ime ọnwa 6 site na ụbọchị nke ihe omume nke na-enye ohere ịhapụ.
Oge ịgba maka imepe ego a
I kwesịrị ịma na inyefe nke ego achọrọ agaghị eme ozugbo. Ọ dabere n'ọtụtụ mpaghara, dịka okwu nke arịrịọ ahụ, oge nnyefe nke akwụkwọ ozi, wdg.
Oge ntọhapụ na-adaberekwa ugboro ole ị na-atụle ego nke atụmatụ nchekwa ego gị. Na ngụkọta oge nke net uru bara uru nke a ụlọ ọrụ ibe enweta ego nwere ike mere site ụbọchị, izu, ọnwa, site na nkeji iri na ise ma ọ bụ ọkara afọ agụmakwụkwọ. N'ọtụtụ oge, oge a bụ kwa ụbọchị, nke na-eme ka o kwe omume ịhapụ nchikota n'ime obere oge.
Ozugbo anabatara gị ịmeghe akwụkwọ, a ga-enyerịrị akaụntụ akụ gị n'ime ụbọchị ise.
Download "Ihe Nlereanya-1-maka-mbido-ịhapụ-rịọ maka onye ọrụ-na-nchekwa.docx"	Ihe Nlereanya-1-maka atụmanya-ntọhapụ-arịrịọ-maka onye ọrụ-ego.docx - Ebudatara ugboro 2857 - 15 Kb
Download "Ihe Nlereanya-2-maka-mbido-ịhapụ-rịọ maka onye ọrụ-na-nchekwa.docx"	Ihe Nlereanya-2-maka atụmanya-ntọhapụ-arịrịọ-maka onye ọrụ-ego.docx - Ebudatara ugboro 2793 - 15 Kb
GỤỌ Email nke na -apụ ngwa ngwa nwere ike bụrụ email dị ize ndụ maka onye dere ya
Akwụkwọ edemede: kpughee ego ndị ọrụ gị January 8th, 2022Tranquillus
gara agaNdepụta omenala na Excel 2010
-esonụNdepụta akwụkwọ ozi iji nabata ma ọ bụ jụ nguzozi na akaụntụ ọ bụla
Dee ozi email ma enweghi aka